WeAreSatoshi စျေး - အွန်လိုင်း WSX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို WeAreSatoshi (WSX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ WeAreSatoshi (WSX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ WeAreSatoshi ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $3 039 970.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ WeAreSatoshi တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
WeAreSatoshi များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
WeAreSatoshiWSX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0811WeAreSatoshiWSX သို့ ယူရိုEUR€0.0688WeAreSatoshiWSX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.062WeAreSatoshiWSX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0739WeAreSatoshiWSX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.725WeAreSatoshiWSX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.512WeAreSatoshiWSX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.8WeAreSatoshiWSX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.302WeAreSatoshiWSX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.107WeAreSatoshiWSX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.114WeAreSatoshiWSX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.8WeAreSatoshiWSX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.629WeAreSatoshiWSX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.435WeAreSatoshiWSX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹6.07WeAreSatoshiWSX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.13.69WeAreSatoshiWSX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.111WeAreSatoshiWSX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.124WeAreSatoshiWSX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.53WeAreSatoshiWSX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.564WeAreSatoshiWSX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥8.66WeAreSatoshiWSX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩96.26WeAreSatoshiWSX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦31.42WeAreSatoshiWSX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽5.95WeAreSatoshiWSX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.23
WeAreSatoshiWSX သို့ BitcoinBTC0.000007 WeAreSatoshiWSX သို့ EthereumETH0.000211 WeAreSatoshiWSX သို့ LitecoinLTC0.00149 WeAreSatoshiWSX သို့ DigitalCashDASH0.000894 WeAreSatoshiWSX သို့ MoneroXMR0.000911 WeAreSatoshiWSX သို့ NxtNXT6.33 WeAreSatoshiWSX သို့ Ethereum ClassicETC0.012 WeAreSatoshiWSX သို့ DogecoinDOGE23.41 WeAreSatoshiWSX သို့ ZCashZEC0.000985 WeAreSatoshiWSX သို့ BitsharesBTS2.5 WeAreSatoshiWSX သို့ DigiByteDGB2.6 WeAreSatoshiWSX သို့ RippleXRP0.288 WeAreSatoshiWSX သို့ BitcoinDarkBTCD0.0028 WeAreSatoshiWSX သို့ PeerCoinPPC0.269 WeAreSatoshiWSX သို့ CraigsCoinCRAIG36.96 WeAreSatoshiWSX သို့ BitstakeXBS3.46 WeAreSatoshiWSX သို့ PayCoinXPY1.42 WeAreSatoshiWSX သို့ ProsperCoinPRC10.18 WeAreSatoshiWSX သို့ YbCoinYBC0.00004 WeAreSatoshiWSX သို့ DarkKushDANK26.03 WeAreSatoshiWSX သို့ GiveCoinGIVE175.69 WeAreSatoshiWSX သို့ KoboCoinKOBO18.48 WeAreSatoshiWSX သို့ DarkTokenDT0.0747 WeAreSatoshiWSX သို့ CETUS CoinCETI234.28